Tababar ku saabsan dhinaca maamulka oo Macaahida Shareecada Islaamka uga furmay Garoowe [Daawomasawirada]
July 12, 2012 - Written by Tababar Lagu tabarayo Maamulayaasha Macaahida Culuunta Shareecada Islaamka ayaa ka furmey Masjidka Al-huda ee Garoowe, Furitaanka tababarkaasi ayaa waxaa ka soo qaybagalay maamulka dalada Macaahida Shuurcda Shareecada Islaamkaee Soomaaliya, Culumado, Aqoon yahan, Madaxda Jaamcada iyo Xubno Ka socda maamulka iyo masuliyiin kale. Tababarkaan ayaa ugu harayn waxaa ka hadalay Shiikh Axmed Faarax Garaase oo ah Gudoomiyaha Dalada Isku Xirka Macaahida Culuunta Shareecada Islaamka ee Puntland kaasoo sheegay in Daladdan ay daba socoto shir sanadi kii hore 26-kii Bishii 6 ilaa 29 sanadkii hore ka dhacay lagu qabtay magaalada Hargaysa kasoo ay isugu yimadeen Culumada ugu caansan dalka Soomaliya iyo macaahida shareecada Shareecada Islaamka ee dalka Soomaliya qaybo badan oo ka mida ah kaasoo u jeedad laga lahaa ay ahayd in la isku xiro macaahida laga barto shareecda Shareecada Islaamkasi ay isaga kaa shadaan manhajka, Shahaadooyinka ayaa waxaa waqtigaa la asaasay daladan isku xirka macaahida Shereecda Shareecada Islaamkaee Soomaliya.
Shiikh Axmed Faarax Gaas ayaa intaa ku daray in shirka qaybtiisa labaad ay u heshay Fursad Magaalada Garoowe laguna tababrayo Maamulayaasha Macaaida Shuruucda Shareecada Islaamkaee Soomaaliya oo dhan laguna barayo khaas ahaan maamulka iyo sida loo maamulo macaahida Shuruucda Shareecada Islaamka iyo xiriirka uu maamulka la yeelana karo saxaafada iyo habka dadka waxa loo baro.
Shiikh Maxamed Ibraahin Jaamac oo ku hadlaya Dalada Isku Xirka Soomaaliya ayaa isan xusaya in shirkii hore lagu dhisay daladan ay kasoo bexeen in la mideeyo macaahida iyo in la dhiso daldaan iyo in la mideeyo manaahijta waxa lagu barto laguna guulaytey dhaamaan intaasi oo hadda aad u fadhiyaaan tabar ay dalada soo qaban qaabisaay.
Shiikha, ayaa sidoo kale xusay in daldan ay soo kor dhinayso in la soo saaro jiil ku habyasan aqoon diini ah huwana akhlaaqdii Shareecada Islaamka dadkoodana gaarsiiya Diinata taasoo ay ku tala jirto dalada sidii loo gari lahaa. Shiikh C/qadir Nuur faarax oo goobta ka hadlay ayaa xusaya in ay aad ugu farxasan yihiin dadka ku hawalan maacida shareecada Shareecada Islaamka ayan aad u soo dhawaynayaan ayna dareensan yihiin maamulayaash shareecda Shareecada Islaamka taosoo ay u istageen in dadkooda ay baraan shareecda Shareecada Islaamka ayan muhiim tahay i dadka ay helaan goob ay ka bartaan shareecda Shareecada Islaamka.
Shiikha ayaa sheegay in ay Ummadu baahi badan ay u qabaan ayna ka sugayaan in ay iyagu bahidaa ay daboolana uuna aad ugu rajo wayan yahay dadka ku hawalan dawradan kulmisa Macaahida Shareecada Islaamka iyo Maamula Macahida Isalaamka ee meesha isugu yimid sidii ay dadka u gaarsiin lahaayeen Shareecada Islaamka Munaasabada lagu furayo tabaraka Maamulayaasha.
C/qaadir Nuur Adan oo ka tirasan Golaha deegaanka oo furitaanka shirkan uu soo wakiishay Duqa Degmada Garoowe oo si rasmi ah u furay ayaa xusay in ay soo dhawenayaan maamulayaasha Macaahida shuruucda Shareecada Islaamkaee Soomaaliya loona baahan yahay in ay si fiican tababarkan ay uga faa’idaystaan si ay bulshdooda uga faa ideeyaan.
Tababrkaan loo qabtay Maamulayasha macaahida Shareecad Shareecada Islaamka ee Soomaliya ayaa waxaa ay maamlayshan ay isaga kale yimaadeen Soomaliya oo dhan kuwaa soo tiradoodu ay gaareyso ilaa 15 macaahid. Tababarka ayaa lagu wadaa in uu soo gaba gaboobi doono asbuuca soo socda dhexdiisa waxaana duruus kala duwan bixiya macalim duruus ka bxiya inta uu socdo siminaarku.